Ogaden News Agency (ONA) – Xisbiga UDJ oo maanta Kuqabtay Caasimada Itoobiya Banaanbax Loogu Magacdaray “Codka Malaayiinta”
Xisbiga UDJ oo maanta Kuqabtay Caasimada Itoobiya Banaanbax Loogu Magacdaray “Codka Malaayiinta”
Posted by ONA Admin	/ September 29, 2013
Sida uu noogu soowaramay wariyehaanaga Addiss Ababa caasimada Gumaysiga Itoobiya, waxaa kadhacay banaanbax balaadhan oo uu soo qabanqaabiyay xisbiga mucaaradka ah ee UDJ (Unity For Democracy and Justice Party), Banaabaxan oo loogu magac daray “Codka Malaayiinta”.
Xisbiga UDJ ayaa maanta wacdaro kamuujiyay wadooyinka waawayn ee Addiss Ababa. Waxaa kasooqaybgalay mudaaharaadkan dad aad utiro badan kuwaasoo kasoo horjeeday dhibaatada ba,an ee kajirta guud ahaan wadanka Itoobiya gaar ahaan xadhiga iyo cabudhinta balaadhan ee laguhayo suxufiyiinta iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka ku,ah nidaamka TPLF/EPRDF ee faashiistaha ah.
Waxaa lasoo dhoobay wadooyinka waawayn ee Addiss Ababa boqolaal ciidanka amaanka ah kuwaasoo aad uhubaysan looguna talogalay inay kahor istaagaan banaanbaxayaasha inaysan gaadhaan fagaaraha caanka ah ee Meskel Square.
Inkastoo iska hor,imaad wayn uusan dhicin hadana waxaa jiray dad tiro badan oo xabsiga lootaxaabay. Siyaasiyiinta caanka ah ee sida sharci darrada ah loo xidhay waxaa kamid ah Eskinder Nega, Woubshet Taye, Reeyot Alemu, Andualem Arage, Natnael Mekonen iyo kuwo kaloo badan, Dhamaan siyaasiyiintan mucaaradka ah waxaa loo cuskaday xadhigooda qaanuun gacan kusamays ah oo Gumaysiga Itoobiya uu oogu talogalay inuu kugumaado cid kastoo isku dayda inaysan uhogaansamin siyaasada Woyaanaha ee kooxda TPLF/EPRDF.
Siday ay sheegeen madaxda xisbiga UDJ ee mudaaharaadkan sooqabanqaabiyay waxay ujeedadoodu ahayd inay beesha caalamka gaadhsiiyaan cadaadiska iyo cabudhinta baahsan ee laguhayo shacabka Itoobiya.
Dhanka kale waxaa lasheegayaa inay arday Muslimiin ah oo kacabanaya dhibaatada ba,an ee Muslimiinta Itoobiya laguhayo mudooyinkii lasoo dhaafay ay xidheen wadada wayn ee isku xidha Addiss Ababa iyo magaalooyin kale sida Lalibela, Sekota iyo Dessie.
Sida uu wariyaha ONA noosheegay waxaa xabsiga lootaxaabay 13 kamid ah dhalinyaradii kaqaybgashay banaanbaxan. Waxaa kale oo lasheegayaa inay nabadsugida Woyaanuhu tuhunsan yihiin inuu soo abaabulay dhalinyarada Muslimiinta ah ee banaanbaxan kaqaybgalay ninka maal qabeenka ah ee layiraahdo Sheikh Mohammed Hussein Ali Al Amoudi, kaasoo udhashay Boqortooyada Sacuudi Carabiya maalgashi badana kawada meelo badan oo dalka Itoobiya kamid ah.
Shacabka kudhaqan Itoobiya ayaa umuuqda inaysan udulqaadan doonin dhibaatada joogtada ah ee laguhayo. Iyadoo uu aad uliito nidaamka kataliya Itoobiya oo umuuqday inuu gabalkiisii dhacay. Dhacdooyinka kasocda Itoobiya iyo meeshay kudanbayn doonaan kalasocda wararkaanaga dambe haduu eebuhu yiraahdo.